४ खेल छुटाएका एरिक्सन ‘”पुरानो” रोगमा अल्झे !! स्पर्सको हारमा उनको भूमिका स्मरण !! - Experience Best News from Nepal
४ खेल छुटाएका एरिक्सन ‘”पुरानो” रोगमा अल्झे !! स्पर्सको हारमा उनको भूमिका स्मरण !!
प्रिमिएर लिग फिचर
टोटनह्याम हट्सपुरका मिडफिल्डर डेनमार्कका क्रिस्टियन एरिक्सन आफ्नो पुरानो पेट दुखाइले खेलमा फर्किएका छैनन। एरिक्सनले चार खेल गुमाइसकेका छन् भने उनका राष्ट्रिय टिमका कोच एज हरिड भन्छन उनि सायद आफ्नो पुरानो पेटको रोगले गर्दा न फर्किएका हुन सक्छन।
२६ बर्षे एरिक्सन पहिलो छ खेल पश्चात २२ सेप्टेम्बरको खेल पश्चात मैदानमा देखिएका छैन। एरिक्सन नेशनस् लिग खेलमा आइसल्याण्ड विरुद्धको खेलमा समेत नफर्किने सम्भावना रहेको देखिन्छ। १३ अक्टोबरमा हुदै डेनमार्क विरुद्ध आइसल्याण्डको खेलमा एरिक्सन बिना निकै कठिन रहने राष्ट्रिय कोचको दाबी रहेको छ।
उक्त पेटमा भएको एरिक्सनमा देखिएको समस्याले डेनमार्कको टिमलाई असर देखाउने नै छ साथै स्पर्सका निम्ति पनि चिन्ताको बिषय बनेको छ। आइसल्याण्डमा हुने उक्त खेलमा एरिक्सनलाई लैजानु निकै खतरा समेत हुने देखिन्छ। दोधारमा परेका कोचले स्पर्सले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको पनि बताउछन।
एरिक्सन हप्ता या महिना खेलमा फर्किदैनन त्यो एकिनको साथ भन्ने अवस्था नरहेको कोचको दाबी छ। आइसल्याण्डसंगको खेल पश्चात डेनमार्क अष्ट्रीयासंग खेल्ने छ।
एरिक्सनले ४ खेलमा प्रिमिएर लिगका ३ खेल वार्टफर्ड, हद्दर्सफिल्ड र कार्डिफ सिटी विरुद्धको खेल गुमाएका छन् भने च्याम्पियन लिगको ठुलो खेल बार्सिलोना विरुद्धको खेल समेत गुमाएका थिए।
उनि खेलमा कहिले फर्किने एकिन छैन।
मौरिन्होलाइ युनाइटेड प्रति बोल्न र बयान दिन प्रतिबन्ध !! बदलिदै छ उनको जागिर
डर्बी खेल चेल्सीलाई क्लिन सिट !! फुल्हामलाई जितको खडेरी
आज राती हुदै छन् प्रिमिएर लिगका ठुला टोली विच भिडन्त !! जानुहोस् कस्को खेल को संग समय तालिका सहित
प्रिमिएर लिग : यो साता हुदै छन् यी टिम विच भिडन्त, जानुहोस् कुन खेल कुन समयमा हुदै (तालिका सहित)
ठुलो खर्चमा पल्सिच भित्र्याउदै चेल्सी ! कति खर्चियो पल्सिच माथि चेल्सीले ?
भिचाईलाई पहिलो जित समर्पण गर्दै लेस्टर !! खेलाडीले कालो पट्टा समर्थकले भिचाई फोटो अंकित जर्सी
Christian EriksenDenmarkenglish premier league
२०१९ मा यसरी फर्किदै छन् रोनाल्डो पोर्चुगलको राष्ट्रिय टिममा !!
सिटीका डियाजले रियल मार्फत गरे डेब्यु !! कस्तो रहयो उनको रियलमा प्रभाव